Xildhibaannada BF oo markii ugu horeysay laga qaadayo canshuur - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaannada BF oo markii ugu horeysay laga qaadayo canshuur
Xildhibaannada BF oo markii ugu horeysay laga qaadayo canshuur
Muqdisho (Caasimadda Online) – Markii ugu horeysay ayaa xildhibanada Golaha Shacabka Soomaaliya waxaa lagu soo rogay Canshuur ka qaadista Gunada ay qaatan.
War Qoraal ah oo ku taariikheysan 9 Bishaan kaas oo ka soo baxay Wasiirka Maaliyadda looguna gudbiyay gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa lagu wargeliyay in lag bilaabo Bisha Octoper laga goyn doono Canshuurta.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa bil walba mushaar ahaan u qaataan (Saddex Kun oo dollar) waxana la filayaa in arrintaan ay maalmaha soo socda dood ka yeeshaan.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Somaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Bayle ayaa sidoo kale shaaciyay inuu socdo qorshe canshuur looga qaadaayo shaqaalaha ka shaqeeya Shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Beyle ayaa xisay in hadda dadka qaar aanan laga qaadin canshuurta ku waajbtay, sababo ku aadan in shuruucda looga qaadayo iyo nidaamka hadda ay socoto, si qof waliba oo muwaadin ah oo dalka ku sugan looga qaado canshuurta.